Mkparịta ụka vidiyo n'enweghị ihe ọ bụla interlocutor
Site n'enyemaka nke ọrụ dị otú ahụ dị ka "Mkparịta ụka vidio na onye na-eme ka onye ọ bụla na-eme ihe ọ bụla" ị nwere ike ikori iji igwefoto weebụ soro onye si n'akụkụ ọ bụla nke ụwa anyị n'oge. Ozugbo nke a mepụtara ndị ọrụ nke usoro ihe omume ahụ site na ihe ọhụrụ ya, n'ihi na ọ na-akpali mmasị ịkọrọ onye si n'obodo ọzọ ma ọ bụ ọbụna mba.
Iji jiri ụfọdụ vidiyo vidiyo, a gwara gị ka ị denye aha, nke na-ewe oge ole na ole nke oge gị .. Tupu ị debanye aha, ịnwere ike ịnụ ụtọ ịkọrọ mkparịta ụka na kamera!
Kasị nkata vidiyo TOP. Enweghị mgbasa ozi. Enwere ọnọdụ dị adị. Ị nwere ike ịhọrọ ndị na-eme njem maka obodo na ọbụna mba. Ọfọn, Anaghị m ekwu na n'ebe ahụ ị nwere ike ịzụta koodu ma nye onye nwere ohere.
E nwekwara ederede nkata na nnukwu mkpokọta ajụjụ na ụmụ agbọghọ.
GYR-GYR GỊ! Igwe vidiyo na-adabere na njirimara kpochapụla site na mail.ru, dị nnọọ tinye n'ime ibe. Akwukwo a di ka onyonyo video Kazakh, ma o nweghi onye na-egbochi ichoputa onye ozo si Russia ma obu Ukraine. Window dị mma maka ịlele onye na-ahụ maka onye ahụ, bọtịnụ mkpu, ihe niile dị ka ọ kwesịrị.
Mkparịta ụka a bụ nkwurịta okwu vidio na-agba mgbe nile na ọ bụ ụzọ nkwurịta okwu maka ntorobịa nke oge a. Nkata a dị mfe. Window abụọ na-ahapụ gị ka ị hụ onwe gị na onye na-akpọ gị na ihuenyo gị. Ọzọ, enwere windo iji zipu ozi na otu ma ọ bụ onye ọzọ.
Ọzọkwa, ị nwere ike ịtu akara okike gị, na okike nke onye ọ bụla a chọrọ, mgbe ahụ search ga-ejedebe na data ị nyere.
Ebe a na-enye gị ohere iji kọntaktị na-ekwurịta okwu n'otu oge na ọtụtụ ndị na-enweghị njikọ n'enweghị ndebanye aha. Na saịtị a ị nwere ike ịhọrọ avatar gị, dee ụdị nwoke, afọ na obodo. Site n'otu mpaghara ahụ, ị ​​nwere ike ịhọrọ onye na-agagharị.
Ebe nrụọrụ a nakwa yana mkparịta ụka vidio ndị ọzọ na-enye gị ohere ikarịtara ndị ọhụrụ na-adọrọ mmasị n'obodo ọ bụla nke ụwa anyị. Ebe a ị ga-ahapụ, ma ọ bụrụ na ị gaghị anwa anwa ikwe ka ịnweta igwe okwu na kamera weebụ nke kọmputa gị. Iji debanye aha na saịtị a, ịkwesịrị ịbanye adreesị ozi-e ma nye paswọọdụ maka nbanye, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịhọrọ onye na-adọrọ mmasị.
Ebe a nwere iwu nke ya, ya mere, ọ dị mkpa ịmatakwu ha, ka ị ghara ichegbu. I nwekwara ike ịgbakwunye ndị enyi gị na ndị enyi gị, na-agba ha ume, ya bụ, na-asị na ịja mma, ma ọ bụ nke ọzọ, na-eme mkpesa banyere àgwà ọjọọ na onye nhazi nke saịtị ahụ.
Igwe vidiyo a nwụrụ ..
Ngwa a "Mkparịta ụka vidio na onye na-ahụ maka enyemaka" nyeere gị aka ịchọta ndị enyi ọhụrụ maọbụ ka ị nwee ezigbo oge. Ihe niile achọrọ n'aka gị bụ ijikọ kamera weebụ ma pịa bọtịnụ "mmalite". Mgbe nke ahụ gasịrị, ngwa ahụ ahọrọ maka gị onye mmekọ. Ọ bụrụ na onye òtù ọlụlụ ahụ adịghị amasị gị, ịnwere ike ịga n'ihu ịchọ onye ọzọ.
Ngwa a anaghị enwe ndị nhazi, ya mere n'ọnọdụ a, ị gaghị enwe ike ịnweta ihe ngosi nke ndị mmadụ karịrị afọ iri na asatọ. Dịka na ebe niile ị na-akparịta ụka, ị nwere ike ịgbanwe ozi ederede ozugbo.
Ngwa a nwụkwara, ndị mmadụ na-esi na ya gaa ọrụ ndị ọzọ.
A na-echekwa videochat a maka nkwurịta okwu site na kamera weebụ. O nweghị ihe efu - windo abụọ maka vidio, windo maka izipu ozi gaa na onye na-agagharị agagharị, na ike ịchọọ onye ọhụụ ọhụrụ. Mfe ma dị mfe iji ma ọ dịghị achọ tupu ndebanye aha.
Videochat - roulette, na-enye gị ohere ikwurịta okwu na ndị ọhụrụ, na-ahapụghị ụlọ gị. Mgbe ị debanyere aha na saịtị ahụ, ị ​​nwere ike ịmalite nkwurịta okwu site na ịpị bọtịnụ "search for interlocutor". Nakwa na saịtị a ị nwere ike ịlele profaịlụ profaịlụ, nke ga-akwado gị ịhọrọ onye na-ahụ maka ya.
A haziri saịtị a n'asụsụ Bekee, ya mere, ndị ọrụ na-amaghị ihe Bekee ga-esiri ike ịghọta akụkụ nke nkata vidiyo. Videochat nakwa ihe niile na-enye gị ohere igbanwe ozi ederede, yana ịhụ interlocutor na ozugbo.
Mkparịta ụka vidiyo "Ka anyị kwuo okwu" na-enye gị ohere iji nkwurịta okwu na ndị mmadụ na-amaghị ama site n'akụkụ ọ bụla nke ụwa anyị. Ị nwere ike ime nke a na nkata, igwe okwu ma ọ bụ kamera. Ọrụ nke saịtị a dị nnọọ mfe, ọ dịghị achọ ndebanye aha na ntọala nkata ọzọ.
Site na ịpị bọtịnụ "ịchọta onye na-eme mkpesa" ị nwere ike ịmalite ikwurịta okwu. Ọzọkwa, "Ka anyị kwuo" na-enye na nkwurịta okwu na ndị ọrụ Vkontakte, ma maka nke a, ị ga-edebanye aha. Ikwu na saịtị a bụ nnọọ mfe na obi ụtọ!
Mkparịta ụka a bụ Rọshịa na-akparịta ụka, ọrụ kachasị ewu ewu maka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-agba ọsọ. Ọ gaghị adaba ịdebanye aha tupu ịmalite nkwurịta okwu, nakwa ma ọ bụrụ na i kweghị ka ịnweta igwe okwu na kamera - ị ga-ahapụ saịtị a.
N'ozuzu, nkata dị mfe ma dị mfe iji, ọ dịghị ihe dị oke na saịtị ahụ, ya mere onye mbido ga-eji ngwa ngwa wepụta ihe mkparịta ụka roulette.